induction brazing musimboti - induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
kuburitsa kuburitsa pfungwa
Induction Brazing Principle-Theory
Induction Brazing Technology
Induction Brazing Principle | Theory
Brazing uye kutengesa ndiyo nzira yekubatanidza zvimwe zvakafanana kana zvimwe zvinoshandiswa uchishandisa zvinhu zvakagadzirwa. Kuzadza zvidhina kunosanganisira mutungamiri, tini, mhangura, sirivha, nickel uye alloys avo. Chengetai iyo yakanyunguduka uye inosimbisa munguva iyi yekuita kuti ibatane nebasa rekugadzirisa zvinhu zvigadzirwa. Izadza yesimbi inokandwa mumubatanidzwa ne capillary action. Kugadziriswa kwekugadzirisa kunoitwa pasi pe 840 ° F (450 ° C) apo kushandiswa kwebasa kunoshandiswa pamatambo anopfuura 840 ° F (450 ° C) kusvika ku 2100 ° F (1150 ° C).
Kubudirira kwezvinhu izvi kunotsamira pakugadzirwa kwegungano, kubvumirana pakati pezvakagadzirwa kuti zvibatanidzwe, kuchenesa, kushandiswa kwekugadzirisa uye kusarudzwa kwakakodzera kwemichina inodiwa kuita chiitiko chinodzokorora.
Utsanana hunowanzowanika nokuunza kubuda kunoputika uye kunoparadza tsvina kana kuti midzi yeirivha inovadzinga kubva mubatanidzwa.
Mazhinji mashandiro ave kuitiswa mumhepo inodzorwa negumbeze remhepo inert kana musanganiswa weiyo inert / inoshanda inodzivirira mashandiro uye kubvisa kudiwa kwekuyerera. Idzi nzira dzave dzakaratidzirwa pane dzakasiyana siyana zvinhu uye chikamu masisitimu kutsiva kana kurumbidza mumhepo muchina tekinoroji neakakodzera munguva - imwechete chidimbu kuyerera maitiro.
Brazing Filler Materials
Brazing filler simbi inogona kuuya nenzira dzakasiyana-siyana, maumbirwo, masero uye alloys zvichienderana nevakashandiswa. Ribhoni, zvigadzirwa zve preformed, paste, waya uye preformed washers zvinongova zvishomanana zvemaumbirwo uye mafomu emagetsi anogona kuwanikwa.
Chisarudzo chekushandisa shanduro chaiyo uye / kana chimiro chinonyanya kuvimba nezvinhu zvemubereki kuti zvibatanidzwe, kuiswa panguva yekugadzirisa uye nzvimbo yebasa iyo chigadzirwa chekupedzisira chinangwa.
Kuchenesa Kunobata Simba
Kuchenesa pakati penzvimbo dzekutsvaira kunobatanidzwa kunotarisa huwandu hwebasa resimbi, capillary action / kupindira kwealloy uye mushure mezvo simba rekupedzana kwakapedzisira. Iyo yakanakisisa iyo yakagadzirirwa mamiriro ekugadzirwa kwechinyakare esirivha ndeye 0.002 inches (0.050 mm) kusvika ku 0.005 masentimita (0.127 mm) kuregererwa kwese. Aluminium inowanzoita 0.004 inches (0.102 mm) kusvika ku 0.006 inches (0.153 mm). Zvikwata zvakakura kusvika ku 0.015 masentimita (0.380 mm) kazhinji hazviwanikwi zvakakwana zvekudzivirira maitiro ekubudirira.
Brazing nemhangura (pamusoro pe 1650 ° F / 900 ° C) inoda kuti kubatana kunosungirirwa kuchengetedzwe kusingakwanisi zvakakwana uye pane dzimwe nguva kudikanwa kwepamusoro pamhepo yakadzika yakadzika kuti ivimbise zvigaro zvishoma zvinosungirirwa panguva yekushisa kwekubisa.
Induction Heating Theory
Induction systems inopa nzira yakanakisisa uye yakarurama yekutsvaira nekukurumidza kupisa nzvimbo yakasarudzwa yegungano. Kufungidzirwa kunofanira kupiwa kusarudzwa kwesimba rinoshandiswa purogiramu, simba rehuwandu (kilowatt rinoshandiswa pamakiromita masendimita rimwe), kupisa nguva, uye kuiswa kwekunyora coil kugadzira kudikanwa kunoda kudiwa kwekushongedzwa kwebhande.
Induction Kutsigira isiri-kutarisa kupisa nenzira yekushandura pfungwa. Simba rekushandisa iAAC inowanikwa iyo induction coil iyo inova iyo inonyanya kufungidzirwa ye transformer apo chikamu chekutsvaga chiri chechipiri che transformer. Chigadzirwa chebasa chinopisa nemagadziriro ezvigadziro 'inherent magetsi resistivity kusvika kune ino induced flowing in the assembly.
Iye zvino kupfuura nepakati pemugadziri wemagetsi (workpiece) inoguma mukupisa sekushandiswa kwemasikati kunopesana nekuyerera kwayo. Izvi kurasikirwa zvakaderera munguva yemazuva ano ichiyerera kuburikidza neAluminium, Mhangura neAlloys. Izvo zvinhu zvisingasviki zvinoda simba rinopisa kupisa kupfuura iyo carbon car counterpart.
Iko kushandura ikozvino kunowanzoyerera pamusoro. Ukama huri pakati pehuwandu hwehupenyu huripo uye hupamhi hwacho hunopinda muchikamu hunozivikanwa sehuwandu hwehuwandu hwekupisa. Chikamu chikamu, ruzivo rwemhando uye hutanda hutambo hunogona kuva nemigumisiro yekushisa kwehutano zvichienderana nehuwandu hwekutaridzika.
Categories Technologies Tags kuburitsa kusungurudza, kuburitsa kuburitsa pfungwa, kuburitsa kuburitsa pfungwa, induction soldering, induction soldering principle, induction soldering theory